March 14, 2020 - Ilo Wareed -
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Shirweynaha xisbiga KULMIYE ayaa la mudeeyay inuu qabsoomi doono bisha June ee sannadkan. Shirweynahan KULMIYE ayaa la filayaa in lagu doorto hoggaanka xisbiga ee shanta sannadood ee soo socota oo ah guddoomiye, afar guddoomiye-xigeen oo kala hoseeya iyo xoghayaha guud ee xisbiga. Waxa kale oo la dooran doona guddiga fulinta ee xisbiga. Suaalaha ugu badan ee siyaasiyan la iska weydiinayo shirweynaha xisbiga ee bisha June iyo natiijadiisa ayaa waxa ka mid ah guddoomiyaha xisbiga oo uu Madaxweyne Biixi hadda hayo, waana su’aasha ugu adag ee aan weli jawaab rasmi ah loo haynin in Madaxweyne Biixi wareejin doono guddoomiyaha xisbiga iyo inuu sii haysan doono guddoomiyenimada xisbiga. Hase yeeshee dad badan ayaa qaba inaanu madaxweyne Biixi wareejin doonin guddoomiyenimada xisbiga KULMIYE, waxaanay dadka aragtidan qabaa aaminsanyihiin in Madaxweyne Biixi ka cabsi qabo inuu xisbigu galo tafaraaruq siyaasadeed haddii uu wareejiyo guddoomiyenimada xisbiga. Dad kale ayaa…
Maxaa Hargeysa dib ugu soo celin kara xayndaabka Jamhuuriyada Soomaaliya?
Sideedaba dareenka runta ah ee bulsho waxa laga dhex helaa munaaqashada maalinleyda ah ee ka dhacda fagaarayaasha dad-weynahu ku kulmaan, siiba dareen celintooda ku aaddan arrimaha siyaasadda. Mujtamaca ku nool ama ka soo jeeda Somaliland (SL) marka aad dhegaysato dareenkooda fal-celineed ee wada-hadalada Xamar iyo Hargeysa, waxa kaaga soo dhex-bixi dhawr mowqif oo dadku qabaan, warqdanina si kooban ayey u falanqayn. Mowqifka 1aad waa in Xamar ay garawsato gooni-isu-taagga Somaliland (SL); taasoo ka dhigan, ama u dhacaysa, inta Xamar leedahay Somaliland annaga ayey na hoos timaadaa in aan wada-hadal bilaabmi karin. Jawaab-celinta mowqifkani waa in mowqifkani yahay xatabad laga soo gudbay, ka dib markii sannadkii 2012 madaxweyne Silanyo ku qanciyey dhammaan haya’adaha dasatuuriga ah ee SL inay bilaa shuruud wada-hadal ula bilaabaan Xamar. Kulankii London ee 2012, waxa kale oo uu markhaati u noqday, in Xamar iyana dhinaceeda, yaqiinsatay in SL aysan toos u hoos iman iyada, laakiin keliya ay…
DAAWO:- Dadweynaha Reer Saylac Oo Ka Qayliyay Cabudhin Ay Sheegeen Inuu Ku Hayo Badhasaabka Gobolka Salal
March 14, 2020 Saylac (Cadceed) – DAAWO:- Dadweynaha Reer Saylac Oo Ka Qayliyay Cabudhin Ay Sheegeen Inuu Ku Hayo Badhasaabka Gobolka Salal Cadceednews Boorama
Midowga Yurub Oo Qoraal Kasoo Saaray Xiisada Ka Aloosan Xuduuda Somaliya Iyo Kenya
March 14, 2020 Muqdisho (Cadceed) –Midowga Yurub ayaa maanta soo saaray warbixin ku saabsan xaaladda Soomaaliya, waxayn sheegeen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacay xuduuda Kenya iyo Soomaaliya iyo ciidamada amniga ee dhowaan la geeyay gobolka gedo ay abuureen daganaansho la’aan iyo barakac ballaaran. Midowga Yurub wuxuu ku eedeeyay dowladda federalka Soomaaliya hantidii iyo feejignaantii milatari ee la rabay in lagu wajaho howlgallada ka dhanka ah Alshabaab ee ka socda labada gobol ee shabbeele in loo leexiyay meel kale. Midowga wuxuu sheegay in wadashaqeyn buuxda loo baahan yahay in ay dhexmarto dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya iyo Dowladaha xubinta ka ah federaalka iyo sidoo kale wadashaqeynta gobolka. Waxa uu tilmaamay in Xalka ugu dambeeya uu yahay, in la dhiso ciidamada isku dhafka ah ee amniga Soomaaliya iyo in la abuuro jawi deggan oo awood u siinaya dhismaha dowladnimada iyo horumarka. “Dhammaan dhinacyada ay khusayso waa inay sameeyaan wax kasta oo…
Soomaalida Oo Lagu Bah-dilay Saami-qaybinta Kuraasta Baarlamanka Cusub Ee Itoobiya ( AKHRISO )
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa shaaciyay jadwalka goob doorashooyinka baaralamaanka dowladda dhexe lagu soo galayo golaha shacabka dalkaasi iyo tirada ka imaneysa gobol walba. Xafiiska guddigaas ee magaalada Addis Ababa ayaa maanta lagu qabtay shirkii lagu shaacinayay goob doorashooyinka sagaalka deegaan iyo labada ismaamul magaalo, waxaana saamiyada gobollada ee la shaaciyey aad loogu bah-dilay Soomaalida. Shirkan ayaa waxaa goob joog ka ahaa hoggaamiyayaasha xisbiyada siyaasadeed iyo wakiillo ka socday bulshada rayidka ee Itoobiya. Guddiga doorashada ayaa waxa uu shirkaasi ku soo bandhigay khariiddada goob doorashooyinka oo ka kooban 547 xubnood. Deegaannada sagaalka ah ee dalkaas iyo labada ismaamul magaalo ayaa waxa ay kuraasta u kala heleen sida soo socota: Deegaanka Oromada: 178 kursi Deegaanka Amxaarada: 138 kursi Deegaanka Shucuubta Koonfureed: 123 kursi Deegaanka Tigreeda: 38 kursi Deegaanka Soomaalida: 23 kursi Deegaanka Bani-shangul: 9 kursi Deegaanka Canfarta: 8 kursi Deegaanka Gambeella: 3 kursi Deegaanka Harerida:…
Congresswoman Ilhan Omar has renewed calls for the US to suspend sanctions against Iran, as the country’s crippled health-care system struggles to deal with the rapid spread of the coronavirus
DAAWO:-Haayadda ARAHA Oo Ceel-Biyood Ay Ka Hirgalisay Deegaanka Saba-Wanaag Ku Wareejisay Wasaarada Biyaha..
March 14, 2020 Boorama (Cadceed) – Haayadda ARAHA Oo Ceel-Biyood Ay Ka Hirgalisay Deegaanka Saba-Wanaag Ku Wareejisay Wasaarada Biyaha Cadceednews.com Boorama Somaliland
DAAWO:-Fanaanka Caanka Ah Ee Nimcaan Hilaac Oo Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyay Columbus Ohia Ee Maraykanka..
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Fanaanka Caanka Ah Ee Nimcaan Hilaac Oo Si Diiran Loogu Soo Dhaweeyay Columbus Ohia Ee Maraykanka..
DAAWO:-Masuliyiinta Shirkada SHABA Oo Kormeeray Dhismaha Taangiga Biyaha Borama..
March 14, 2020 Boorama (Cadceed) – Masuliyiinta Shirkada SHABA Oo Kormeeray Dhismaha Taangiga Biyaha Borama.
DAAWO:-Madaxwayne Muuse Biixi Oo Gudi U Magacaabay Ka Hortega Cudurka Caronavirus..
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Madaxwayne Muuse Biixi Oo Gudi U Magacaabay Ka Hortega Cudurka Caronavirus..
DAAWO:-Xukuumada Madaxwayne Muuse Oo Si Adag U Beenisay Warar Lagu Baahiyay Facebooga..
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Xukuumada Madaxwayne Muuse Oo Si Adag U Beenisay Warar Lagu Baahiyay Facebooga..
DAAWO:-Wasaarada Caafimaadka Somaliland Oo Ka Warbixisay Qaabta Ay Ugu Diyaar Galeebeen Ka Hortega Caronavirus
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) –Wasaarada Caafimaadka Somaliland Oo Ka Warbixisay Qaabta Ay Ugu Diyaar Galeebeen Ka Hortega Caronavirus..
DAAWO:-Golaha Guurtida Somaliland Oo Maanta Loo QaybiyayXeerka Doorashooyinka Somaliland..
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Golaha Guurtida Somaliland Oo Maanta Loo QaybiyayXeerka Doorashooyinka Somaliland..
Dood Xiiso Badan:- Ururka Mar Kale Iyo Midnimo Maxay Keeni Karaan
March 14, 2020 Hargeysa (Cadceed) – Dood Xiiso Badan, Ururka Mar Kale Iyo Midnimo Maxay Keeni Karaan..
Martida: Barashada Culuumta Teknooloojiyadda
Barnaamijka Martida Makrafoonka waxa uu ku saabsan yahay barashada culuumta teknooloojiyadda. Waxaa marti ku ah barnaamijka Cabdalla Macallin Maxamuud oo ah gudoomiyaha Machadka Global Net eek u yaalla magaalada London. Waxaa barnaamijka soo diyaariyey soona jeedinaya Ridwaan Xaaji C
WHO: Europe waa Xuddunta Coronavirus ee Waqtigan
Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqday in Yurub ay tahay xuddunta xanuunka coronavirus xilli ay dalal badan oo dunida ah la tacaalayaan xakameynta faafitaanka firuskan islamarkaana ay xirayaan xuduudahooda iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiyada
Dhageyso Barn. Hambalyada
Dhageyso Barn. Dhacdooyinka
Akram Ali Eltom, Federal Minister of Health, regretted the failure of hospitals to quickly diagnose the first case of Coronavirus in Sudan.
Wareysi Wasiirka Caafimaadka Somaliland
Somaliland: Waan u Diyaar-garownay ka Hortagga Coronavirus
Iyadoo kiisaskii ugu horreeyey ee xanuunka coronavirus ee loo yaqaano COVID 19 ay soo weriyeen dalalka Bariga Africa sida Kenya iyo Ethiopia ayaa wasaaradda Caafimaadka ee Somaliland waxa ay mar kale ka warbixisay sida ay ugu diyaargaroobeen ka hortagista xanuunkan dunida faraha
Three Somalia soldiers were killed and two injured on Friday after an ambush by al-Shabab militants in a base run by the army in Mahaday town, in Middle Shabelle region, an official said on Satur
Ku soo dhawaada barnaamijka Caweyska Washington oo qodobbo xiiso leh ay ku jiraan. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo jeedinaya.
Barnaamijka Dhacdooyinka Todobaadka, waxaa soo jeedinaya Jamal Axmed Cismaan.
Guddiga doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa shaaciyay goob doorashooyinka baaralamaanka dowladda dhexe lagu soo galayo golaha shacabka dalkaasi.
Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, Thursday said blood donated by Kenyans has been traced to Somalia and other neighbouring countries in what appears to be a case of a criminal syndicate diverting the much-needed commodity for monetary gai
Gantaalo lala Beegsaday Saldhig Ciidamada Iraq iyo kuwa Mareykanka
Digniinaha faragelinta shisheeye ayaa la mid ah sida warbixin UK laga helay oo aanan weli la daabicin.
Coronavirus: Xayiraaddii socdaalka ee uu Mareykanku ku soo rogay 26 dal oo Yurub ah oo dhaqangashay
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xaalad qaran oo degdeg ah, isagoo ogolaaday in la isticmaalo 50 bilyan oo doolar oo lacag gargaar ah.
A new theater of conflict emerged in East Africa when opposing Somali forces clashed on Kenya’s border last week. Kenya has hinted that it could annex parts of Somalia to keep al-Shabab terrorists out of its te
As the coronavirus pandemic tore deeper into the fabric of American public life, United States President Donald Trump declared[Read More…] The post Trump declares national emergency as coronavirus crisis deepens appeared first on Calanka.com.
Coronavirus memo says British Airways will be ‘parking aircraft in a way we never have before’
Siduu caalamka u saameeyay cudurka Coronavirus?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ku aaddan cudurka coronavirus.
Tim Mynet ayaa haatan Ilhan Cumar u qaabilsan dhanka ololaha doorashada